Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Midnimo oo Dhagaxlay Kaqabsoomay.
Shirkii Faraca Midnimo oo Dhagaxlay Kaqabsoomay.
Waxaa maanta oo Axad ahayd xerada qoxootiga Dhagaxlay kaqabsoomay kulankii caadiga ahaa ee faraca Midnimo, kaas oo bishiiba mar loo qabto xubnaha faraca.
Kulanka ayaa sidii caadada ahayd lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay hogaanka arimaha diinta ee faraca Midnimo.
Intaas kadib gudoomiyaha faraca ayaa bulshada siiyay warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysay, isagoo kusoo dhaweeyay xoghayaha faraca si uu xubnaha ugu akhriyo wararkii gudaha Ogadenia iyo guud ahaan geeska Africa, wuxuuna xoghayuhu bulshada u ifiyay warar badan oo ay u oomanaayeen.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay xubin kamid ah Golaha Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO mudane Maxamuud Sooc, oo kulanka marti ku ahaa wuxuuna mas’uulku kulanka kasoo jeediyay khudbad dheer oo aad muhiim u ahayd.
Mudane Sooc ayaa ugu horaynba kawarbixiyay taariikhihii kala duwanaa ee halganka Ogadenia uu soomaray iyo guud ahaan isbadalada geeska Africa, isagoo woxoogaa kataataabtay burburka soo wajahay xukuumada wayaanaha.
Sidoo kale halgame Sooc ayaa bulshada lawadaagay kulankii gudiga fulinta JWXO ee Swedan iyo wixii kasoo baxay, wuxuuna mas’uulku qodob qodob usoo qaatay qodobadii laga dooday laguna heshiiyay.
Gabagabadii kulankii maanta ayaa kusoo dhamaaday su’aalo ay bulshadu mas’uuliyiinta waydiiyeen iyo jawaabo waafi ah oo ay madaxdu bixisay.